अन्जु पन्तको संगितमा ‘धेरै माया नदेउ मलाई बजार मा ! – Nepali news portal
अन्जु पन्तको संगितमा ‘धेरै माया नदेउ मलाई बजार मा !
१ पुस २०७७, बुधबार १२:०६ December 16, 2020 बुद्ध सन्देश संवाददाता
’ अन्जु पन्तको संगितमा ‘धेरै माया नदेउ मलाई’ बोलको गिती भिडियो एलबम बजारमा आउन थालेको छ ।
सो पन्तकै छोरी परितोषिका र कुनसाङ्ग बमजनको अभिनय प्रस्तुती रहेको छ । २५ मंसिरदेखि उनले आफ्नै अफिसियल च्यानल मार्फत आएको छ ।
सुमधुर गितसंगित अनि आर्कषक अभिनयले दर्शकको मनपराउने विश्वास गरिएको छ । यसमा नरेश कडेलको निर्देशन, सुरेश वाग्लेको शब्द र संजिव वराएलीको व्यवस्थापन रहेको जनाईएको छ ।